Yusuf Garaad: September 2016
Beri ayaan London ku qaatay course dhowr bilood socday oo ku saabsan cilmu nafsiga iyo farsamada macaammilka bulshada. Waxaa ka mid ahaa casharro is xiga oo ku saabsan sida qofka loo akhriyo adiga oo aan la hadal.
Lebbiska uu qofku gashan yahay, sida uu u gashan yahay, sida uu u socdo, qaabka uu u fariisto, sida uu u hadlo, sida uu dadka u fiiriyo, codadka iyo shanqaraha uu sameynayo, sida uu wax u akhriyo, waxa agtiisa ka dhaca falceliska uu ka sameeyo, qaabka uu wax u cuno ama u cabbo intuba waa bandhig. Asaga oo aan ogeyn uguna talo gelin ayuu qofku isfasirayaa. Wuxuu sheegayaa qofka uu yahay.
Haddii aad fasiraaddaas akhrisan taqaan waxay kuu sahleysaa in aad garato heerka aqooneed, tarbiyada iyo guud ahaanba qofkani qofka uu yahay.
Dabcan waa qiyaas. Khalad ayay noqon kartaa siiba marka uu sameeyo qof aan tababbar u haysan.
Marka aan dhex mushaaxayo saxaafadda bulshada waxaan mar kasta arkaa dad ayaga oo aan ugu talo gelin haddana sharraxaad ka bixinaya aqoontooda, khibraddooda, fahamkooda iyo akhlaaqdooda. Dad ogaal la'aan is fasiraya ayaan arkaa.
Posted by Yusuf Garaad at 13:33:00
50 Soomaali ah Dil laguma Xukumin, laakiin ayaa Wehlisa
Baaritaan kooban ka dib waxaa ii soo baxday in aanay jirin Soomaali kontomeeyo ah oo dil lagu xukumay dalka India ka dib markii lagu helay dembi burcadbadeed.
Villa Somalia twitter ayay ku beenisay xukunka Maxkamadeed.
Saxaafadda India marka aan akhriyay waxaan arkay in wargeys Ingiriis ku qoran kan adduunka loogu akhris badan yahay, The Times of India, uu qoray 24 Sept in 119 Soomaali ahi ay qirteen dembiyo burcadbadeed, lagana yaabo in 50 ka mid ah la marsiiyo ciaqaabta ugu culus. Wargeysku wuxuu intaa raaciyay in ay dhici karto in 50-kaas Soomaalida ah lagu xukumo dil.
Maxaabbiista oo ku jira xabsga Taloja oo 50 km u jira Mumbai, Gobolka Maharashtra, waxay India qabatay 2011 iyo 2012. Tiradoodu waxay ahayd 120 laakiin mid ayaa ku dhintay xabsiga.
War aan xaqiijin la'ahay wuxuu ii sheegay in Xukunku uu dhacayo 30-ka bishan Sept.
Xeer Ilaaliyaha khaaska ah, Renjeet Sangle, oo kiiska ka warramay ayaa sheegay in India ay dhowri doonto Xeerka Qarammada Midoobay ee Badaha UNCLOS, xukunka Maxkamaddana lagu saleyn doono caddeymo aan mugdi lahayn.
Posted by Yusuf Garaad at 09:53:00
Maanta waxaa la soo gebagebeeyay dhegeysiga Diidmada Hordhaca ah ee Kenya ay uga soo horjeeddu furitaanka Dacwadda Kenya ka dhanka ah ee ay Soomaaliya u soo gudbisay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ee magaaladan Hague.
Soomaaliya ayaa maanta bixisay jawaabteeda kama dambeysta ah. Waxaa hadlay saddex qareen oo hadalladoodu ay is kaabayeen iyo Dr. Mona Sharmaan oo soo gunaanadday codsiga Soomaaliya ay u soo jeedineyso Maxkamadda.
Waxaa kale oo uu soo sheegay hadalladii uu isagu Maxkamadda ka jeediyay wareeggii koowaad in ay Qareennada Kenya hadda aqbaleen ama ugu yaraan aanay dood ka hor imaaneysa aanay bixin sidaa darteedna looga talo geli karo in sidooda ay u aqbaleen.
Wuxuu taxay toban qodob oo qaanuuniyan muhiim ah oo uu sheegay in uu ku jeediyay jawaabtiisii wareegga koowaad. Taas oo Kenya ay fursad u heysatay in ay riddiso markii ay sameyneysay soo jeedinteedii wareegga labaad. Mid ka mid ah tobankaa qodob oo ay diideen ma jiro. Keliya qodob kooban ayay muran geliyeen isagana wuu ka jawaabay kaas oo qaanuuniyan fasiraaddiisu ay dheer tahay ayaa jiray.
Qodobbada wuxuu ka soo xigtay emaillo, dokumentiyo, fasiraado iyo jawaabo ay xilliyo kala duwan bixiyeen Norway oo qortay MoU-da, Kenya iyo Soomaaliya. Dhammaantood waxay tilmaamayeen in MoU 2009 ay ku saabsan tahay keliya in labada dal aan midna waxba ka qabin in kan kale uu Guddiga Qarammada Midoobay ee CLCS u gudbiyo soohdintiisa qalfoofa qaaradeedka. Tusaaleyaashaas oo dhan meelna ugama xusna ayuu yiri in ay MoU 2009 ay tahay in iyada loo raaco habka xallinta khilaafka soohdin badeedda.
Reichler wuxuu yiri Kenya fasiraad kama bixin sababta ay u rumeysan tahay in xal la gaari karay. Waxa keliya oo Prof Lowe uu soo xigtay, ayuu yiri, dokumenti Dowladda Kenya ay hay’adaheedu isu direen 8 August 2014. Laakiin waxaa xusuus mudan in xilligaasi ahaa markii la diyaarinayay kulan la filayay in uu dhaco oo rajo xal la qabay.
Xataa inta dooddan Maxkamaddu ay socotay fasiraadda ay Kenya ka bixisay paragraph 6 ee MoU 2009 dhowr jeer ayay is beddeshay iyaga oo marba fasiraaddoodii ugu dambeysay ka sameynaya dib-u-gurasho xeel dood.
Mona Sharmaan ayaa soo gunaanadday doodda Soomaaliya. Waxay kabahiisa gashatay oo ay qirtay hadalka uu yiri Garyaqaanka Kenya. Wuxuu ku tilmaamay ayay tiri in marka wadahadalka Kenya furmayo ay Soomaaliya markaa uun ay ka soo baxday sannado badan oo dagaal sokeeya, masiibooyin aadminnimo iyo falal argagixiso oo baahsan. Waa marka ay Kenya door bidday in ay wadahadal la furto Soomaaliya. Waa dhab ayay tiri. Weliba Soomaaliya waxay sida ay 2014 ahayd ka sii liidatay, 2009 markii MoU lala saxiixday oo welibana ay Dowladdu ahayd mid cusub. Taas ayaana caddeyneysa in MoU 2009 aanay xammili karin miisaanka ay Kenya siineyso.
Maxay Soomaaliya u dooni kartay, ayay Maxkamadda weydiisay Mona, in ay lugaha la gasho xilli aan soohdinteeda la cayimin? Sharci aanay hor geyn karin si ay kheyraadka ka maqan u hesho iyada oo aan ognahay in Soomaaliya ay aad ugu tiirsan tahay kaalmo shisheeye?
Mona waxay soo jeedisay codsiga Soomaaliya ee ugu dambeeya.
Waxay Maxkamadda ICJ ka codsatay in ay diiddo diidmada hordhaca ah ee Kenya oo ay furto dacwadda Soomaaliya ay soo gudbisay ee ka dhanka ah Kenya.
Dhegeysiga dacwaddani wuxuu soo billowday Isniin 19 September 2016. Halkan ayaad ka akhrisan kartaa qormadeyda ku saabsan soo jeedintii Kenya ee wareegga koowaad.
Waxaa xigtay Talaada oo ay Soomaaliya Qareennadeedu bixyeen jawaab. Halkan ka akhriso:
Arabaca Galab ayuu billowday Wareegga Labaad. Kenya soo jeedinteeda, ka akhriso halkan:
Maanta soo jeedinta ay Soomaaliya sameysay ayaa u dambeysay dacwadda.
Waxaa laga wardhowrayaa Go'aanka ay Maxkamaddu riddo ka dib marka ay labada dhinac ka soo jawaabaan su'aalo ay Maxkamaddu weydiisay oo aan mar kale idinkula wadaagi doono bartan, haddii Rabbi idmo.
Posted by Yusuf Garaad at 19:44:00